Action Alerts Archives - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda wuxuu cod siinayaa codsi ka yimid macallimiinta Afgaanistaan ​​si ay awood ugu siiyaan inay sii wataan waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Dhammaantood Bax !!! 4 waxyaalood oo fudud oo qof walba samayn karo hadda.
Muwaadin kasta oo reer Afgaanistaan ​​ah oo khatar ku jira-haween, rag, carruur, waayeel, naafo-waxay xaq u leeyihiin inay magangelyo dalbadaan. Waa inaan dhammaan soo saarnaa. Qaxitaan buuxa oo dhammaystiran waa lama huraan anshax iyo wax ku ool ah. Halkan waxaa ah 4 tallaabo oo fudud oo qof walba qaadi karo si uu u taageero dadaalkaan. [sii wad akhriska…]
Khayraadka lagu Caawiyo Qaxootiga Afgaanistaan ​​(Haweenka Dumarka Afgaanistaan)
Dumarka Afgaanistaan ​​Haweenka waxay diyaariyeen liis ay ku qoran yihiin ilo ay ku taageeraan kuwa Afgaanistaan ​​oo isku dayaya inay nabad helaan. [sii wad akhriska…]
Baaqa Bulshada Rayidka: Taageer UNAMA
Shuruudaha hadda ee Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Afgaanistaan ​​wuxuu dhacayaa Sebtember 17. Xuquuqda aadanaha ee haweenka iyo gabdhaha reer Afgaanistaan ​​waxay ku xirnaan kartaa sii wadideeda iyo ballaarinta. [sii wad akhriska…]
Wax kasta oo suurtogal ah: Dhiirrigelinta UN & Waxqabadka Bulshada Rayidka ee Afgaanistaan
Bulshada rayidka ahi waxay sii wadaysaa inay raadiso fursado ay ku soo qaadanayso tusaalooyin iyo saldhigyo waxqabad macno leh ku soo jeedinaya kuwa ku jira nidaamka Qaramada Midoobay ee leh awoodda wax -ka -qabashada Afgaanistaan. Fadlan akhri soo jeedintii ugu dambaysay ee lagu soo diray warqad ku socota Danjiraha Kanada u fadhiya Qaramada Midoobay oo fadlan ka fiirso saxeexa si aad u muujiso taageeradaada. [sii wad akhriska…]
Bulshada Rayidka waxay sii wadaa inay ugu yeerto Beesha Caalamka inay wax ka qabtaan Afgaanistaan
Maaddaama masiirka Afgaanistaan ​​uu ku dhacayo gacanta adag ee Taliban, Bulshada Rayidka ee Caalamiga ah waxay sii wadeysaa inay ku baaqdo tallaabo lagu yareynayo dhibaatada bini'aadamka oo lagu noolaan karo fursadaha nabadda. Waxaan ku dhiirigelineynaa dhammaan xubnaha GCPE inay raadiyaan ficil ama ficillo ay ugu yeeraan dowladooda iyo wakiillada Qaramada Midoobay si ay u qaadaan qadiyadda xuquuqda aadanaha iyo nabadda Afghanistan. [sii wad akhriska…]
Xubno ka tirsan bulshada rayidka ah ee caalamiga ah ayaa xaqiijinaya in xuquuqda aadanaha iyo amniga haweenka iyo gabdhaha ay tahay inay ku xirnaadaan tallaabo kasta oo ay Qaramada Midoobay go'aansato inay ka fuliso Afghanistan. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto dadaalkan, adoo saxeexaya baaqan si loo ilaaliyo haweenka Afgaanistaan, si loo dhiso UNSCR 1325 oo ah dhaqan caalami ah oo lagu dhaqmi karo, iyo in la hubiyo in nabad -ilaaliyayaashu diyaar u yihiin inay maamuusaan mabaadi'da. [sii wad akhriska…]